Ugu Weyn Ee Persimmon
Xilliga dayrta waxay siisaa deeqsi faa'iido leh. Waqtigaa, waa waqtigii loogu talagalay fiitamiinada fiitamiinada - ciriiri, taas oo gacan ka gaysata sidii loo xoojin lahaa habka difaaca jirka xilliga jiilaalka. Qeybaha kala duwan ee beeraha, miro waa berri, laakiin marka la kariyo waxaa lagu magacaabaa midho. Aynu isku dayno inaanu ogaano waxyaabaha muhiimka ah ee ku jira miro, waxa faa'iido iyo waxyeelo keenaya isticmaalkooda.
Noocyada isticmaalka iyo faa'iidooyinka dareenka ee jirka haweeneyda
Saamaynta ciriiriga jirka ee haweenku waa mid aad u ballaaran: miraha waxaa loo isticmaalaa cunto, loo isticmaalo ujeedooyinka daawooyinka, loo isticmaalo kondomoolojiyada iyo miisaan lumis. Tixgeli sifooyinka sheygan aan dhicin, ka kooban, gaar ahaan isticmaalka iyo codsiga. Tilmaamaha iyo astaamaha loo yaqaan 'Persimmon' waxaa lagu magacaabaa miraha midab-dhalaalaya oo dhalaalaya oo ka soo jeeda qowmiyadaha.
Waxaan ku kobcineynaa guriga markaan ka dhageysaneyno: shuruucda beeraha iyo daryeelka
Sababta - miro caan ah oo caafimaad leh xilliga deyrta. Si loola macaamilo berrito casri ah, ma ahan lagama maarmaan in la iibsado dukaanka. Sida loo kobcin karo guriga, waxaan ka helaynaa maqaalkani. Sharaxaad Waxaa jira in ka badan kun nooc oo ah warshadan reer Ebony. Kuwani waa geedo qallafsan ama dhir leh iyo geedo la cuni karo.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Persimmon 2020